औद्योगिक विकासका लागि निजीक्षेत्र निरन्तर लबिङमा छ | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश-सुदूरपश्चिम औद्योगिक विकासका लागि निजीक्षेत्र निरन्तर लबिङमा छ
औद्योगिक विकासका लागि निजीक्षेत्र निरन्तर लबिङमा छ
शङ्कर बोगटी, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ७ नं प्रदेश
प्रदेश नं ७ मा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । विकास पूर्वाधारमा पछाडि परेको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने थुप्रै आधार हुँदाहुँदै पनि राज्यको दूरदर्शी नीति अभावलगायत कारण तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि परेको छ । सम्भावनाको हिसाबले अग्रस्थानमा देखिए पनि विकासमा पुछारमा रहेको ७ नं प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जडीबुटी तथा ऊर्जाबाटै दीर्घकालीन विकासमा लैजान सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर ७ का अध्यक्ष शङ्कर बोगटीको भनाइ छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका बोगटी सङ्घीयतामा विकासको परिकल्पना गरिए पनि अहिलेकै अवस्थामा निजीक्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताउँछन् । यहाँको निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि साझा मुद्दाको रूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), कर छूट, औद्योगिक वातावरण, पूर्वाधारमा लगानी, कृषिको व्यावसायिकता विकास, ऊर्जा विकासलगायत विषयमा जोड दिँदै आए पनि राज्यको ध्यान नपुग्दा ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गठनपछि ७ नं प्रदेशको निजीक्षेत्रले गरेको अपेक्षा, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीयता कार्यान्वयनका सबल एवम् दुर्लभ पक्षलगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ७ नं प्रदेशका अध्यक्ष शङ्कर बोगटीसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :
७ नं प्रदेशमा लगानी गर्न अहिले पनि निजीक्षेत्र हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
प्रदेशभित्र निजीक्षेत्रले लगानी नै नगरेको त होइन । तर, जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो पक्कै भएको छैन । हाल यो प्रदेशभित्र जे–जति लगानी भएको छ, त्यो यस क्षेत्रकै स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले गरेका हुन् । यो क्षेत्रमा ठूलो लगानीका उद्योग खासै खुल्न सकेका छैनन् । यहाँ बाह्य लगानी शून्यप्रायः छ । यसको मुख्य कारण औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक क्षेत्र, उपयुक्त नीति, निर्यातमूलक नाकालगायतको अभाव हो । यस कारण निजीक्षेत्रले यहाँ उद्योग लगाउन सकेको छैन । यतिका समयसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले समेत पूर्णता पाउन नपाएकाले ठूलो लगानीका उद्योग खोल्ने अवस्था पनि रहँदैन । सम्भावनाको हिसाबले अग्रभागमा रहे पनि उपयोगिता पुछारमै देखिन्छ । सम्भावनाको उचित पहिचान गरेर राज्यले सोहीअनुरूप व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यसरी निजीक्षेत्रलाई आइपर्ने समस्याको उचित सम्बोधन गरिदिने हो भने यो प्रदेशमा लगानी आकर्षित हुन सक्छ ।
निजीक्षेत्रसँगको छलफल र पर्याप्त सुझावकै आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट ल्याएको बताइन्छ । अब पनि राज्यलाई दोष दिएर उम्कन मिल्छ र ?
होइन, प्रदेश नं ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट ल्याउनुपूर्व हामीसँग छलफल र सुझाव मागेको हो । हामीले सुझाव पनि दियौं । तर, दिइएका सुझाव कत्तिको सम्बोधन भयो भन्ने मुख्य विषय हो । सुझावका लागि त केन्द्रीय स्तरबाट पनि अधिकारीहरू आउँछन् । तर, हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन कहाँनिर देखियो त ? कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लामो समय सल्लाहकारको रूपमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई यो प्रदेशको वास्तविकता नजीकबाट थाहा छ । तर, खै त त्योअनुरूप बजेट आएको ? प्रदेशको विकासका लागि हिजो हामीसँगै लबिङमा थियौं । अहिले उहाँ नै मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, ठोस–ठोस रूपमा योजना आउनै सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ३ महीनाका लागि सार्वजनिक गरिएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको उपयोगिता कहाँ देखियो ? त्यसकारण राज्यका नीतिनियम तथा कार्यायोजना दूरदर्शी, प्रभावकारी र उपयोगी हुनु आवश्यक छ । आवश्यकताको महसूस गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ । विनियोजित बजेटको उपयोगिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । राज्यलाई हामीले लगानीका लागि भनिरहेका छैनौं, व्यावसायिक वातावरण मात्रै बनाइदिने हो भने निजीक्षेत्र लगानी गर्न तयार छ ।
व्यावसायिक वातावरण नभएरै निजीक्षेत्रको लगानी आउन नसकेको हो त ?
हो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अहिले पनि हामीले परिवर्तनको महसूस गर्न पाएका छैनौं । हामीले कर छूटको माग गरेको १ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । प्रदेश सरकारले कर छूट होइन, बरु कर वृद्धि गर्‍यो । करको मार व्यवसायीलाई मात्रै नभएर सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि परेको छ । सुविधाअनुरूप कर तोक्नु स्वाभाविक हो, तर सुविधा केही पनि छैन । कर मात्रै बढाएर हामीले परिकल्पना गरेको विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यहाँ आयात–निर्यात नाका एउटा पनि छैन, औद्योगिक क्षेत्र छैन । यो विषयमा त प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो नि ⁄ त्यस कारण १० वा १५ वर्षसम्म कर छूटको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशमा औद्योगिक विकास हुने अवस्था देखिँदैन । यहाँ एउटा प्रदर्शनी स्थलसम्म बन्न सकेको छैन । उद्योगका लागि जमीन प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । उद्योग लगाउने पैसाले जमीन किन्नै पुग्दैन । सरकारले जमीन लिजमा दिने व्यवस्था त मिलाउन सक्नुपर्छ । व्यवसायीले व्यावसायिक वातावरण खोजेका हुन् ।
व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घले किन पहल गर्न सकेन त ?
औद्योगिक विकास र व्यावसायिक वातावरण निर्माणकै लागि भनेर प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ गठन भएको हो । हामी थप सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा छौं । व्यवसायीको हकहितको सुनिश्चिततासँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि राज्यसँग हाम्रो निरन्तर लबिङ भइरहेको छ । यहाँको आर्थिक विकासको सवालमा यहाँको निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर लागेको छ । सङ्घीयतामा हामीले तुलनात्मक रूपमा विकासको अपेक्षा बढी गरेका थियौं । तर, अहिलेकै कार्यशैली र कार्ययोजनालाई हेर्ने हो भने हामी आशावादी छैनौं । महँगीको मार छ । मन्त्री, मन्त्रालय गाडी खरीदमै व्यस्त देखिन्छन् । विकासविनाको विलासी जीवनशैलीले हामी उचाइमा पुग्न सक्दैनौं । कतिपय अवस्थामा वास्तवमा सङ्घीयताको अर्थ कतिपय नेताले नै नबुझेको अवस्थामा हामी अन्योलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । अरूका सुझाव पनि ग्रहण गर्न नसक्ने आफै पनि नजान्ने अवस्था आएपछि कसरी विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । सेती महाकली कर्णाली हाम्रै प्रदेशभित्र छन् । पश्चिम सेती बन्छ भन्ने सुनिएको कति धेरै वर्ष भइसक्यो । बरु मेगावाट घटाएर भए पनि पश्चिम सेत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । दूरदर्शी भएर लाग्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित दोहनबाटै प्रदेशको सम्वृद्धि सम्भव छ ।
सङ्घीय सरकारप्रति यहाँ को अपेक्षा के हो ?
प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिने थुप्रै आधार हामीसँग छन् । मुख्यतया कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जडीबुटी तथा ऊर्जामा राज्यले लगानी गर्नुका साथै निजीक्षेत्रलाई त्यसमा सहभागिता गराउने किसमले वातावरण सृजना गर्ने हो भने हामीले छोटो समयमै आम्दानीका स्रोत पहिल्याउन सक्छौं । सङ्घीय सरकारप्रति हाम्रो अपेक्षा भनेको के हो भने करवृद्धि होइन, करका दायरा त्यो पनि आवश्यकताको आधारमा बढाउनुपर्छ । अर्को, सरकारले कैलाली तथा कञ्चनपुरका घोषणा गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पूर्णता दिनुपर्छ । आयात निर्यात नाका यो प्रदेशमा अपरिहार्य छ । यहाँ सञ्चालित उद्योग व्यवसायको संरक्षण र उत्प्रेरणामा सङ्घीय सरकारको आवश्यक सहयोगको खाँचो छ । पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश भएकाले यसका लागि प्रदेश सरकार आफैले र सङ्घीय सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ ।